Clear iPhone Memory - Si fudud, Fast iyo tayo leh
Haddii aad user iPhone ah in muddo ah, waxaa hubaal ah in aad waa in ay dhamaato meesha lagu kaydiyo aad iPhone at hal dhibic ama kan kale. Xaqiiqada ah in la'aanta ah ee lagu kaydiyo waa u gaar ah oo ay xaalad aad u dhibsado, waxa uu noqonayaa mid ka sii niyad isku dayaya ilaa lacag la'aan ah qaar ka mid ah meel bannaan oo ku saabsan iPhone sida ay tahay, ilaa xad daacad ah, wax badan oo ay adagtahay in la sameeyo.
1. Delete barnaamijyadooda la isticmaalin
Hadda, haddii aad sidoo kale waa sida ugu isticmaala macruufka dunida oo dhan, oo aad loo xidho si loo soo afjaro la xamuulka ah barnaamijyadooda ku saabsan iPhone. Waxaad arki, waana ay adag tahay in ay la dagaallamaan jirrabaadda ee iibsato kuwa dhan barnaamijyadooda cusub ama lagala lacag la'aan ah ka App Store ah. Sidaas, ma ahan la yaab leh in aad ku dhammaan karaan inay la daadiyo aad u badan wax soo saarka, kulan iyo biilasha kale ee aad iPhone in aad si dhib leh loo isticmaalo waqti dheer. Iyo, in ka badan muddo ah ay bilaabaan in ay cunaan in aad xasuusta iPhone.
Welwelina sidaad u tirtiri kartaa barnaamijyadooda la isticmaalin sida isticmaalaya hababka hoos ku qoran.
Just miiran iyo ceshato mid ka mid ah app calanka u rabin gurigaaga screen iPhone ilaa dhan walxood ee ay bilaabaan in / ruxruxaya. Waxaad hubaal arki doonaa in dhammaan barnaamijyadooda aad soo bixi badan tahay bilaabi doonaa dhaqaaqo in dhowr ilbiriqsi oo ay la socdaan calaamad yar X sare ee mid kasta oo ka mid ah. Si aad u tirtirto barnaamijyadooda ka, si fudud wax miiran on X ku app gaarka ah ee icon.
Waxaa jira hal hab oo dheeraad ah si ay u tirtirto barnaamijyadooda ku saabsan iPhone, waxaad tagi kartaa Settings> General> Isticmaalka iyo ka dibna eeg sida badan ee xasuusta loo isticmaalay ay barnaamijyadooda ku saabsan iPhone. Marka aad hesho app la kor ugu badan ee bannaan ee qaadashada oo u baahan in laga saaro, aad si fudud u leeyihiin in ay wax miiran magaca app kadibna riix on ikhtiyaarka ah Delete App.
2. saar podcast jir iyo videos
Hadda, aynu wada ognahay in kuwa podcasts iyo videos iska qaataan badan oo boos aad iPhone. Waa hagaag, haddii aad ku badbaadi kuwa on your computer ama si fudud haddii aadan u baahan tahay mar dambe waad i soo raaci kara tallaabooyinka sida hoos ku siiyo si ay u tirtirto oo lacag la'aan ah ilaa meel aad iPhone.
Talaabada 1: Waxaad Unsubscribe karaa podcast ah aadan u baahnayn oo ag maraya in app Podcasts ah. Markaas, riix doorasho 'Edit' ka dibna calaamad X ku geeska bidix ee sare ee podcast gaar ah. Ugu dambeyntii, jaraa'id ku 'qabtay' doorasho dhammayn nidaamka.
Talaabada 2: Delete dhacdo gaar ah podcast in aadan u baahnayn mar dambe. Inaad marin in podcast ka dibna mari qaybtii ugu wajahan dhinaca bidix si aad u hesho fursad aad ku tirtirto.
3. Save photos in WordPress ama Flickr
WordPress - Waa inaad leedahay DropBox app ee mobile bixi, waayo, taasu aad iPhone. Waxaad ka heli kartaa halkaan . Hadda, waxa ugu horeeya ee ah in aad samayso waa in ay tagaan goobta aad DropBox halka aad rabto in sawiro ku kaydsan. Markaas, jaraa'id ayaa in ka badan falalka menu (...) Astaanta siiyo dhinaca gacanta midigta sare ee app. Next, dhibic ka hoos menu, guji File doorasho Upload ah.
Hadda, si fudud u dooro sawiro aad rabto in aad ku kaydiso oo riix on ikhtiyaarka ah Upload mar kale.
Flickr - Waxaan ka wada hadlaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ay u geliyaan badan oo dhan photos ee roll camera in Flickr. Kuwani waa tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay raacaan si ay u awoodaan inay sameeyaan in.
Connect aad PC iyo iPhone
Hadda, u hagaagsan oo dhan sawiro aad la Lugood
Wixii tallaabada ugu dambeysa, waxaad si fudud u leeyihiin in ay geliyaan, kuwaas oo sawiro in Flickr isticmaalaya browser internetka.
4. Deji fariimaha aad si toos ah u dhacayo
Talaabada 1: Tag app Settings ka dibna garaac Messages.
Talaabada 2: Markaas, riix ikhtiyaarka Hayso Messages ka hoos Message qaybta History.
Talaabada 3: sidoo kale mid ka mid ah fursadaha Dooro; 30 maalmood ama 1 sano.
Talaabada 4: Hadda, jaraa'id ikhtiyaarka ah "Delete 'ka menu popup ah si loo xaqiijiyo in aad rabto lahaa macruufka in ay tirtirto dhamaan fariimaha yihiin in ka weyn markii aad cayimay.
5. One-click xal in ay nadiifiso xasuusta iPhone - SafeEraser Wondershare
Wondershare SafeEraser ugu fiican macruufka qalab 'masixi' software in aad ka heli kartaa gacmahaaga maanta. Waxaa aad u fiican loogu talagalay iyo qabtaan shaqo ah ee sida joogtada ah isagoo tirtira oo dhan macluumaadkaaga shakhsiyeed ka qalab macruufka la isticmaalayo ee Creech US Military technology-ka qoraal ah.
On top of in, waxaad isticmaali kartaa SafeEraser qabato waxan soo socda si aad u fudud, laakiin marka hore ha loo hubiyo in aad soo bixi oo lagu rakibay on your computer.
Files junk nadiifi.
Talaabada 1: Burcad SafeEraser iyo xiriiriyaan iPhone si aad u computer oo sug ilaa codsiga ogaadaa qalab aad. Marka sameeyo, saxaafadda doorasho 'Nadiifinta 1-Click' ka interface ugu weyn ee app.
Talaabada 2: Marka scan ay ka badan tahay, waa in aad arki wadarta guud ee junk aad leedahay aad iPhone. Si fudud u riix qaybta ka ah 'nadiifinta' si ay u bilaabaan tirka files junk ah. Nadaafadda ayaa lagu sameyn doonaa dhowr daqiiqo
Masixi tirtiray Data
Talaabada 1: Tani waa habka ay u tirtirto alaabta la soo dibabaxayaal in aad iPhone laakiin weli laga yaabaa in lagu degan qaar ka mid ah xasuusta gudahood. Bilow bilaabay SafeEraser iyo doorto ee 'masixi tirtiray Faylal ay ka interface ugu weyn.
Talaabada 2: Marka app ayaa ku dhameysatay kaalinta baar qalab aad u dhan files tirtiray in weli waa meel aad iPhone degan xoogaa in dheeraad ah xusuusta oo qaali ah, si fudud u riix 'masixi Hadda' button. Waxa kale oo aad dooran kartaa faylasha aad rabto in aad la tirtiro.
Talaabada 3: ma waxaa looga baahan doonaa inaad gasho 'tirtirto' uu furmo suuqa gujisid soo socda ka dibna riix badhanka masixi Hadda mar kale.
Xogta gaarka loo leeyahay Nadiif ah
Talaabada 1: From interface ugu weyn, dooro ikhtiyaarka ah ee masixi Private Data. App waa in hadda toos ah u bilaabi aad ka baareyso iPhone u qadarka xogta shakhsiga ah waxaa.
Talaabada 2: Marka scan ayaa ku dhameysatay, app waa in ay muujiyaan liiska dhammaan xogta gaarka ah; waxaad karaan kuwa aad rabto tirtiray oo markaas masixi button riix Hadda. Marka aad samayn in, waxaad sidoo kale yeelan doonaan in ay galaan "tirtirto 'uu furmo suuqa gujisid soo socda iyo Hadda mar kale riixi masixi badhanka.
Waxaad kala soo bixi kartaa maxkamadda free of Wondershare SafeEraser ka badhamada download hoos ku qoran.
> Resource > Clean-up > Sida loo tayo leh oo cad iPhone Memory